Wararka - Waa maxay mustaqbalka takhasuska mashiinnada NC iyo sida loo doorto?
Shiinaha, takhasuska makiinada CNC wuxuu noqday mid caalami ah tobankii sano ee la soo dhaafay, iyo soosaarayaasha qalabka mashiinka CNC sidoo kale waxay ubaxeen meel kasta. Xadka shirkadaha ganacsiga ee NC ayaa hoos u sii dhacaya, hoos udhaca, iyo adeegsiga tikniyoolajiyadda ee ku takhasusida mashiinada NC aad iyo aad ayaa loo adeegsadaa. Waxay ku sagootisay xilligii masago iyo qoriga.
Markii uu soo ifbaxay internetka sanadihii ugu dambeeyay, dhalinyaro aad u tiro badan ayaa ceyrsaneysa shaqada internetka, taas oo horseedeysa yaraanta xirfadaha ku jira warshadaha mashiinada NC Beerista xirfadlayaasha mashiinnada NC kuma haboona. Sidoo kale waa isku mid berrinka cilmi baarista iyo horumarinta qalabka mashiinka CNC. Hal-abuurnimada teknolojiyadda xirfadeed ee CNC laguma kala saari karo qalabka iyo farsamada. Falanqaynta ugu dambeysa, waa la'aanta hagitaanka xirfadleyda mashiinnada CNC Waa mid ka mid ah sababaha muhiimka ah ee tiknoolajiyada xakamaynta lambarrada guryaha ay uga dambeeyaan Japan iyo Jarmalka.
Tikniyoolajiyadda xakamaynta lambarrada, oo sidoo kale loo yaqaanno teknolojiyadda kumbuyuutarka xakamaynta lambarrada, ayaa ah tiknoolajiyadda lagu ogaanayo xakamaynta barnaamijka dhijitaalka ah iyadoo loo marayo kombuyuutarka. Tilmaamaha yar yar ee kumbuyuutarka laga soo saaro iyada oo loo marayo habka amarka ayaa loo gudbiyaa qalabka adeegga ee loo yaqaan 'servo drive device' si loo wado mootada ama jilitaanka hidda-socodka si uu u kaxeeyo qalabka si uu u shaqeeyo. Xirfadleyda CNC waa shaqaalihii dhameystiray howlahan taxanaha ah waana aqoonyahano farsamo sare leh. Waqtigan xaadirka ah, hibooyinka noocan oo kale ah guud ahaan guud ahaan Waxaa laga heli karaa laba wadiiqo: mid waa hibada uu tababaray dugsiga tababarka xirfadeed ee NC; kan kalena waa xirfadle xirfadeed iyo farsamo yaqaan CNC oo koray ka dib markii hawlwadeennadu ay bartaan teknolojiyada CNC iyada oo loo marayo tababarka shaqada ee shirkadaha.
Xilligii cusbooneysiinta badeecada, tayada iyo saxsanaanta alaabooyinka ayaa aad iyo aad u adag, iyo shuruudaha takhasus u sameynta mashiinka CNC sidoo kale waa ka sareeya oo ka sareeya. Tayo la'aanta ku timaada takhasuska makiinadda CNC waxay horseedday yaraanta tayada ee suuqa buluugga. Mustaqbalka, waxay sidoo kale noqon doontaa mid ka mid ah qaybaha hibada ee ganacsiyada si ay u noolaadaan.